DAAWO SAWIRRO: Dowladda hoose oo ku howlan hagaajinta meelaha biyaha fadhistaan – Gedo Times
DAAWO SAWIRRO: Dowladda hoose oo ku howlan hagaajinta meelaha biyaha fadhistaan
25th April 2016 admin Wararka Maanta 4
Gudddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobalka Banaadir, Cabdicaziis Cilmi Cali iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ay ugu kuurgalayeen sida loo hagaajiyay meelaha loogu talagalay in ay biyaha galaan marka uu roobka yimaado.
Mas’uuliyiintan ayaa meelaha ay maanta tageen waxaa kamid degmooyinka Boondheere, Howl-wadaag iyo Wadajir oo dowladda hoose ee Xamar ay diyaarisay si biyaha markii hore fadhiisan jirey waddooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho isla markaana sababi jirey dhibaatooyin ay kamid tahay mid caafimaad iyo tan isugu socodka.
C/casiis Cilmi Cali, oo ah guddoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dowladda hoose ay ku talagashay in meesha laga saaro dhibaatooyinka ay keeni jireen biyaha xireya marinada magaalada xilli roobaadka.
Dowladda hoose ee Xamar, ayaa hadda waxaa ay xooga saareysaa sidii loo hagaajin lahaa dhammaan waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo dhowr jid oo muhiim u ah caasimadda ay horey loogu guuleystay in dayactir lagu sameeyo.
Wasiirka amniga Puntland oo mar kale ku celiyay in la mamnuucay Itoobiyaan Garoowe ku sugan
Daawo Sawirrada: Dowladda Talyaaniga oo baabuur dagaal ugu deeqday maamulka Galmudug